महेन्द्रपुलमा खुल्यो अत्याधुनिक ल्याब एपिएल
पोखराको महेन्द्रपुलमा बुधबारबाट अन्नपूर्ण प्याथ ल्याब (एपिएल) सञ्चालनमा आएको छ । करिब १ करोड लागतमा खुलेको ल्याबले सेवा सुरुआतको अवसरमा पुस महिनाभर सित्तैमा मधुमेह जाँच गर्ने सञ्चालक गीता कार्की पन्तले जानकारी दिइन् । दक्ष र अनुभवी जनशक्ति र पूर्ण स्वचालित मेसिनबाट जाँच गरिने उनले बताइन् । कार्कीले भनिन्, ‘महेन्द्रपुलको मेडिकल एरियामा धेरै क्लिनिक थिए तर आधुनिक प्रयोगशाला थिएनन्, पूर्ण स्वचालित मेसिन र दक्ष जनशक्तिबाट गुणस्तरीय रिपोर्ट दिने हाम्रो प्रतिवद्धता हो… पुरा पढौ
गर्भवती महिलाको हातमा अण्डा, घरमा झण्डा
गर्भवतीलाई पोषिलो खाना र पहिचान गराउनका लागि घरघरमा झण्डा गाडिने भएको छ । नलगाड नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा रहेका गर्भवतीलाई पहिचान गरी पोषिला खानेकुरासहित घरघरमा झण्डा गाडेर सहयोग गर्ने भएको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका ४५५ महिलाको घरमा झण्डा गाड्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । गर्भवती तथा सुत्केरीलाई स्वास्थ्य अवस्था सुधार गरी निरोगी बनाउका लागि अण्डा उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तै स्थानीय जातको तोरीको तेल, एक… पुरा पढौ
मानिसको नशामा हावा पसे यस्तो खतरा !
हाम्रो नशामा पाइपमा पानी बगेजस्तै गरी रगत बगिरहेको हुन्छ । यसैले कुनै पनि माध्यमबाट हाम्रो रक्तबाहिनी नलीहरुमा हावा पस्यो भने, त्यो हावा रगतको साथ साथै हाम्रा रक्तनलीहरुमा बग्न थाल्छ । यसरी रगतका साथ हावा बग्ने क्रम तबसम्म जारी रहन्छ, जबसम्म त्यो हावाले आफ्नो आकारअनुरुपको नली भेट्टाउछ अर्थात् हावा सजिलै छिरेर पार गर्न सक्छ । तर हाम्रो शरीरमा कतिपय स्थानहरुमा अत्यन्तै सुक्ष्म रक्तनलीहरु पनि हुन्छन्, जसमा हावा छिर्न सक्दैन । यस्तो… पुरा पढौ
चिसोमा तरुल खानुको मज्जा छुट्टै, फाइदा विछट्टै
तरुल चिसो मौसममा नै फल्ने गर्छ र यो स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । तरुल गर्मी प्रदान गर्ने तरकारी भएकाले यसलाई चिसो मौसमका लागि निकै उत्कृष्ट खानेकुरा मानिन्छ । चिसो मौसममा तरुल खानुका फाइदाबारे जानकारी लिऔं । फाइबरयुक्तः तरुल फाइबर अर्थात् रेशाले भरिपूर्ण हुन्छ त्यसकारण यो पेटका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । फाइबरयुक्त खानेकुराको सेवनले आन्द्राको फोहोर सफा हुन्छ जसका कारण खाना राम्रोसँग पच्छ । त्यसकारण तरुल खाँदा तपाईंको पाचनक्रियासँग… पुरा पढौ
अर्वुद रोगबाट कसरी बच्ने ?
क्यान्सर काउन्सिल नेपालद्वारा आयोजित क्यान्सर रोग विषयक सचेतना कार्यक्रममा यस रोगसँग बच्नका लागि आहारविहारमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक भएकामा जोड दिइएको छ । आहारबिहार र असावधानीका कारण धेरै व्यक्ति क्यान्सरको जोखिममा परेको बताउँदै कार्यक्रमका वक्ताले यस सम्बन्धमा बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वीर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्रा डा विष्णुदत्त पौडेलले रहनसहन, आहारबिहार र असावधानीका कारण धेरैले क्यान्सर रोगबाट ज्यान गुमाउनुपरेको बताए । सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा आदिको सेवनले क्यान्सर… पुरा पढौ
तपाइँको ब्लडप्रेसर बढेको छ कि ?
के तपाईंलाई चिसोको समयमा रक्तचाप (ब्लडप्रेसर) बढेको छ ? यदि छ भने समयमै चिकित्सकसँग जाँच गर्नुहोला । बेवास्ता गर्नुभयो भने ज्यानै पनि जान सक्छ । जाडोमा अन्य समयभन्दा ३० प्रतिशत बढी हृदयाघातको सम्भावना रहने भन्दै चिकित्सकले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका हुन् । चिसो भएपछि रगतको नली खुम्चँदै जाने र रक्तचाप बढ्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका हुन् । चिकित्सकका अनुसार रक्तचाप जति बढ्यो मुटुका धमनी पनि बिगँ्रदै जान्छ… पुरा पढौ
धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा ‘अक्सिजन प्लान्ट’
धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङमा ‘अक्सिजन प्लान्ट’ सञ्चालन आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा पहिलोपटक ‘अक्सिजन प्लान्ट’ सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘प्लान्ट’ सञ्चालन भएसँगै अब पुरानो ‘अक्सिजन सिलिण्डर’ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । सो मन्त्रालयको रु ९४ लाख ४० हजारको लागतमा अस्पतालमा प्लान्ट जडान गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी रानामगरले जानकारी दिए । अस्पतालले निजी कम्पनीले पोखरा तथा बुटवलमा उत्पादन गरेको… पुरा पढौ
बच्चालाइ चिसोबाट कसरी जोगाउने?
जाडो मौसममा विषेशगरी बालबालिकालाई अनेकौं समस्य आउन सक्छ । शिशु एकदमै संवेदनसिल हुने र सानोतिनो कमजोरीबाट पनि गंभिर समस्या आउन सक्नेहुनाले चिसो याममा बालबच्चालाइ रुँघा लाग्ने, निमोनिया हुने समस्या हुन्छ । कतिपयले बच्चालाई चिसो नलागोस भनेर धेरै लुगालगाइदिने हुदा बच्चाको शरीर गुम्सने र पसिना आउने हुन्छ । पसिनाले बच्चालाई अझ बढी चिसो लाग्छ । जाडो समयमा बच्चाले पटक पटक पिसाब फेर्ने र चिसो बनाउने भएकोले बच्चाको कपडा समय(समयमा बदल्नुपर्छ ।… पुरा पढौ
प्याजको बोक्रा फाल्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
धेरैजसो मानिसहरु प्याज काट्ने बेला त्यसको बोक्रा निकालेर पछि त्यसलाई फ्याँक्ने गर्दछन् जबकी यस्तो गर्नुहुँदैन । यद्यपी, यो वास्तविकता हो कि प्याजको बोक्रा सिधै खानु हुँदैन तर तपाईं यसलाई अन्य तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यो तपाईंको स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । एन्टी इन्फ्लामेटरी गुणः यदि तपाईंको छालामा कुनै प्रकारको एलर्जी भयो भने तपाईं प्याजको बोक्रा र पानीको प्रयोगले राहत पाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि प्याजको बोक्रालाई रातभरी… पुरा पढौ
पोखरा मन्टेसरीमा युआरएलको सहकार्यमा शिविर
पोखरा १६ लामाचौरको गैह्राबारीमा रहेको पोखरा मन्टेसरी प्रिस्कुलले शनिबार आयोजना गरेको शिविरमा ४ सय २ जनाले सित्तैमा रगत जाँच गराएका छन् । युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी(युआरएल)को प्राविधिक सहयोगमा भएको शिविरका सहभागीको मधुमेह र रगतमा हुने खराब बोसो (टिजी) सित्तैमा जाँच गरिएको हो । मन्टेसरीका अध्यक्ष थीरबहादुर थापाले व्यवसायसँगै सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न कार्यक्रम गरिएको बताए । उनले भने, ‘कमसेकम वर्षमा १ सामाजिक काम गरौं भन्ने हो । विद्यार्थी, अभिभावक र यहाँको… पुरा पढौ